सलाम, प्रहरी नेतृत्व र स्थानीय जनप्रतिनिधिः यसरी नै समुदायलाई जोगाइदिनु! - खबरमञ्च खबरमञ्च
सलाम, प्रहरी नेतृत्व र स्थानीय जनप्रतिनिधिः यसरी नै समुदायलाई जोगाइदिनु!
१० जेठ, समाचार टिप्पणी, at 4:44 PM
By खबर मञ्च / May 23, 2020 / Comments Off on सलाम, प्रहरी नेतृत्व र स्थानीय जनप्रतिनिधिः यसरी नै समुदायलाई जोगाइदिनु!
मेची पुलबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्दै बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशकुमार भुजेलसहितको टोली
विर्तामोड । भोलि के होला थाह छैन, तर अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्ने हो भने झापाको सिंगो समुदायलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको प्रयासलाई सलाम भन्नैपर्छ।
भोलिको परिस्थितिले अर्कै मोड लिन पनि सक्ला। तर आजसम्म शुरुका दिनमा दुईजना संक्रमित बाहेक समुदायमै रहेका स्थानीयबासीमा संक्रमण देखिएको छैन।
जुनबेला देशमा लकडाउनको अवस्था आयो भारतबाट नेपालीहरु ह्वार्ह्वार्ती नेपाल आए। जति आए आइहाले, आउन नसक्नेहरु भारतमै क्वारेन्टाइनमा बसे।
कतिलाई ल्याइयो कति उतै बसे। त्यो बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाको नेतृत्वको टोली सीमामा प्रहरी तैनाथ गर्नतिर लाग्यो। आजको स्थिति हेर्ने हो भने त्यो दुरदर्शिता नभएको भए स्थितिले अर्कै रुप लिन सक्थ्यो।
साथै सशस्त्र प्रहरीका पोस्टहरु थपिए। सीमामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ भएपछि भारतबाट लुकीछिपी आउनेलाई सीमामै समातेर क्वारेन्टाइनमा नराखेको भए समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रभत्रै सल्किन सक्थ्यो।
पछिल्लो समयमा यो सामाग्री तयार पार्दासम्म कचनकवल गाउँपालिकाका ३३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखियो। तर तिनीहरु सबै क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरु हुन्। जस्ले गर्दा उनीहरुको सम्पर्कमा व्यक्ति कोही पनि थिएनन् र कन्ट्याक ट्रेसिङको काम गर्नु परेन।
शनिवार दिउँसो झापा गाउँपालिकाका एकजना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ।
अहिले पनि भारतबाट आउनेहरुको संख्या धेरै छ। तर तिनीहरुलाई समुदायमा जान दिइएको छैन। सोझै क्वारेन्टाइन तथा होल्डिङ सेन्टरहरुमा राखिएको छ।
सात दिनयता झापाको काँकरभिट्टा, भद्रपुर, कचनकबल, टाघनडुब्बा र गौरीगञ्ज नाकाबाट एक हजार दुई सय जना नेपाल प्रवेश गरेकोमा झापाका दुई सय छन्।
उनीहरुलाई आफ्नै पालिकाको क्वारेन्टिनमा लगिएको छ। एक हजार विभिन्न होल्डिङ सेन्टर र सीमा नजिकका क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्।
सीमाबाट भित्रिरहेका नेपालीलाई समुदायमा मिसिन नदिन सीमाको पहिलो पंतिमै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता र रेडक्रसकर्मीले सघाउने गरेका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैं सीमासम्म पुगेर आफ्ना सर्वसाधारण नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन्। आफ्ना क्षमताले भ्याएर निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनमा ल्याएर उनीहरुलाई राखिँदैछ।
Last Modified: May 24, 2020 @ 7:19 am
झापा गाउँपालिकाका १ जनासहित थप ३६ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि
झापामा कोभिड १९ अस्पताल र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने टुंगो लाग्यो
राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा चैतसम्मकाे बैठक र भ्रमण भत्ता नलिने घाेषणा
सर्वाेच्चले लकडाउनमा थप आठ प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने
प्रदेश १ मा कोरोना भाइरसलाई जित्नेको संख्या ७८ पुग्यो, बिहीबार एकै दिन ३० जना डिस्चार्ज